Xiaomi Automobile သည် Beijing Yizhuang စက်ရုံကို အဆင့်နှစ်ဆင့် ဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို - Pandaily
နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် Xiaomi သည် ပေကျင်း စီးပွားရေး နှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်Xiaomi ကား စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည်.
ခရိုင် တာဝန်ရှိသူများက Xiaomi ၏ စမတ် ကား စီမံကိန်းတွင် Xiaomi ၏အဓိက ဌာနချုပ် ၊ အရောင်း ဌာနချုပ် နှင့် R & D ဌာနချုပ် တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် နှစ်စဉ် မော်တော်ယာဉ် ၃၀၀, ၀၀၀ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ တစ်ရုံ ကို အဆင့်နှစ်ဆင့် ဖြင့် တည်ဆောက် မည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပထမ နှင့် ဒုတိယအဆင့် များ ၏ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် ၁၅၀, ၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ပထမ နှင့် ဒုတိယအဆင့် များ ၏စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ် မှုမှာ ၃၀၀, ၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀ ၂၄ ခုနှစ် တွင်ပထမဆုံး မော်တော်ယာဉ် များ ကိုပေးပို့ ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ် လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က Xiaomi က Q3 ဝင္ေငြ အစီရင္ခံစာမွာXiaomi ကား စီမံကိန်း ချောချောမွေ့မွေ့ တိုးတက် နေသည်အသင်း ၀ င် ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဒီ မတိုင္ခင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေနႛက ၂၀၂၁ ခုႎႀစ္Xiaomi သည် အုပ်စု၏ နှစ်ပတ်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ ညီလာခံ ကိုကျင်းပ သည်တည်ထောင်သူ Lei Jun က Xiaomi ၏ပထမဆုံး စက်ရုံကို ပေကျင်း၊ Yizhuang တွင် အခြေချ ရန် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာခဲ့သည်။
Xiaomi သည် Beijing Yizhuang ကိုရွေးချယ် ရခြင်း ၏အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်း တစ်ခုမှာ ၎င်းသည် Xiaomi ၏ စမတ် စက်ရုံ ၏ အခြေစိုက်စခန်း လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှု စင်တာ သို့ ပေကျင်း ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ စက်မှုလုပ်ငန်း ၏အဓိက နေရာ လည်းဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပြီးနောက် ပေကျင်း စီးပွားရေး နှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဇုန် သည် မျိုးဆက်သစ် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ၊ အဆင့်မြင့် မော်တော်ယာဉ် များ နှင့်စွမ်းအင် စမတ် ယာဉ် အသစ် များ၊ ဇီဝ နည်းပညာနှင့် ကျန်းမာရေး ၊။ ၎င်းကို ထွန်း သစ် စစ က်မ ှု လုပ်ငန်းများ အပေါ် အခြေခံ၍ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ စက်မှုလုပ်ငန်း များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုပုံစံ ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi နဲ႔ Huawei တို႔ဟာ NIO ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ Veron New Energy မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ပေကျင်း စီးပွားရေး နှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဇုန် သည် ဒေသတွင်း ဂျီဒီပီ ၁ ၉၃. ၄၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀. ၃ ဘီလီယံ) ၊ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၈. ၈% တိုးတက်မှု နှင့်စုစုပေါင်း စက်မှု ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး ယွမ် ၄ ၂၄. ၃၆ ဘီလီယံ ၊။ ၎င်းတို့အနက် ထိပ်တန်း စက်မှုလုပ်ငန်း လေးခု သည်စုစုပေါင်း စက်မှု ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး ယွမ် ၄ ၀၃. ၇၄ ဘီလီယံ ရှိပြီး စုစုပေါင်း စက်မှု ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး ၏ ၉၅% ကျော်ရှိသည်။